10 တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားတရုတ် > 10 တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 07/02/2021)
ဒဏ္ofာရီ၏ပြည်, မင်းဆက်များ, ယဉ်ကျေးမှုများ, နှင့်ကြီးစွာသောမှော်တရုတ်တည်ဆောက်ခြင်းလူများ, ၏အိမ် 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ. နေရာတိုင်းသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်, တိုင်း cobblestone အတွက်ရှေးဟောင်းပုံပြင်များကိုပြောပြ, တံတား, နှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေ 1000 ရေကန်များ.
လာမည့် 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ, နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွားများဖြစ်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်တစ်သက်တာခရီးအတွက်ပြင်ဆင်ပါ.
1. တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာ: Zhangye Danxia Landform
တစ် ဦး ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘူမိဗေဒဖြစ်ရပ်ဆန်း, Gansu ပြည်နယ်ရှိ Zhangye Danxia အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည် 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ. တွင် 2009, “ မိုးတိမ်နီ” Danxia အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်လာသည်.
၏ပန်းခြံဒြပ်ပေါင်းများ 50 စတုရန်းကီလိုမီတာ, Qilian တောင်တန်း၏ခြေရင်းနားတွင်အနားယူနေသည်. ဤ သဘာဝအံ့သြစရာ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်သောအလှတရားကိုဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်. တစ်ချိန်ကသမုဒ္ဒရာဖြစ်ခဲ့သည်, တဖြည်းဖြည်း၎င်း၏ landform ထိပ်နှင့်လမ်းကြောင်းသို့အသွင်ပြောင်း, လိမ္မော်ရောင်မှစိမ်းသည်, လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာလှပသော.
ငါတရုတ်ပြည်ရှိ Danxia Landform သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ရောက်နိုင်မည်နည်း?
Lanzhou ကနေ Zhangye ကိုတစ်နာရီအတွင်းသင်ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ယူပါ ရထားခရီးသွားခြင်း၏ဂေဟစနစ်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်း. ဒါဟာသာ6ရထားနာရီ.
2. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: Yuanyang ဆန်စပါးများ
သငျသညျ Adventures ရှာကြသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်မော်ကွန်းစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေ၏ 3,000 Yuanyang ဆန်ကြမ်းပြင်များတွင်ခြေလှမ်းများ. သင်ဤအံ့သြဖွယ်ဆန်ကျန်ကြွင်းသောနေရာများယူနန်ပြည်နယ်၌တွေ့လိမ့်မည်, Ailao တောင်စောင်းတွေမှာ. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Hani လူမျိုးတွေဟာဒီအံ့ဖွယ်ရှုခင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ် 2,500 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ.
‘ကျွမ်းကျင်သောပန်းပုဆရာ” ကလုပ်သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် သူတို့ရဲ့ရှင်းလင်းသောလက်၌ site ကို, ထက်ပိုမိုအပေါ်အနီရောင်မြစ်တလျှောက် 113 စတုရန်းကီလိုမီတာ. နို ၀ င်ဘာသည်တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်ဒုတိယအများဆုံးမော်ကွန်းနေရာများသို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်သည်.
ပဌမ, မင်းကူမင်းမြို့ကိုသွားသင့်တယ်, ပြီးတော့ဘတ်စကားဖြင့် Yuanyang သို့. Jianshui သို့ကျည်ဆံရထားသည်ခရီးသွားရန်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, ထို့နောက်ဘတ်စ်ကားကို Yuanyang သို့သွားပါ.
3. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: Qinghai ရေကန်
တရုတ်ပြည်၏အမြင့်ဆုံးရေကန်, Qinghai ရေကန်သည်တရုတ်ပြည်သို့တတိယအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်. ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ဒီရေကန်ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျရေကန် Koko မဟုတ်ကြောင်းသိသင့်ပါတယ်, တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်. ထိုကွောငျ့, တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးများက၎င်းကိုမြင့်မြတ်သည်ဟုယူဆကြသည်.
ဤအချက်ကိုအပြင်, ပြောင်းလဲနေတဲ့ရာသီအလိုက်ရှုခင်း, Qinghai ရေကန်ကိုထူးခြားစေပြီးတရုတ်ပြည်ရှိမည်သည့်နေရာမျှမတူပါ. နွေရာသီတွင်သင်သည် Qinghai ရေကန်သို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်, ဆောင်း ဦး သို့မဟုတ်နွေ ဦး, နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရေကန်အခါတိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ.
ပထမဦးစွာ, Xining သို့ရထားစီးပါ, ထို့နောက်သင်ဘတ်စ်ကားစီး။ သို့မဟုတ်ကားတစ်စီးကို Qinghai ရေကန်သို့ငှားနိုင်သည်.
4. Zhangjiajie – မိုးရွာသွန်းမှုတိုင်
မဏ္-ိုင်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းမှု, နိမ့်ကျသော Zhangjiajie သစ်တောဥယျာဉ်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြွင်းမဲ့စိုးရွံ့ထိတ်လန့်စေသောသဘာဝတရားဖြစ်သည်. Zhangjiajie သည်သင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာမတွေ့နိုင်သောသဲကျောက်ဖွဲ့စည်းမှု၏နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ဤမော်ကွန်းနေရာထက်ပိုပါတယ် 200 ထိပ်, spiers, တောင်ကြီးကမြေကြီးကနေတက်လာတယ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, သင်ဤဝေးလံခေါင်သီသောဒေသတွင်နေထိုင်သောလူနည်းစုသုံး ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကံကောင်းလိမ့်မည်, နှင့်တရုတ်ရေသမင်နှင့်တရုတ်gရာ salamander တူသောမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိမျိုးစိတ်.
သင်ပေကျင်းကနေခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, ရှန်ဟိုင်း, သို့မဟုတ် Xian, ထို့နောက် Zhangjiajie သို့ရထားစီးပါ.
5. Jiuzhaigou – ရောင်စုံ Alpine ရေကန်
အံ့သြဖွယ်ရေတံခွန်များ, ရေကန်များ,9တိဘက်ရွာ, နှင့်အများဆုံး လှပသောရှုခင်း, Jiuzhaigou ချိုင့်ဝှမ်း၏တ ဦး တည်းလုပ်ပါ 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်မော်ကွန်းနေရာများ. မင်း Jiuzhaigou ကိုမင်းရှမ်းတောင်တန်းဒေသမှာတွေ့လိမ့်မယ်, အဲဒါတကယ်တော့ အမျိုးသားဥယျာဉ်.
၏အမြင့်မှာ 2,472 မီတာ. သငျသညျငါး Flower ရေကန်တွေ့လိမ့်မယ်. ထူးခြားတဲ့အရောင်တွေကြောင့်ဒီခရီးစဉ်ဟာလုံးဝကျိုးနပ်ပါတယ်, အိုင်အောက်ခြေ travertine ကျောက်၏ရလဒ်, နှင့်ရောင်စုံရေညှိ. ဤ2အဖြစ်အပျက်များသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသတ္တဝါများဝိုင်းရံနေသောထိပ်များနှင့်အပြာ - စိမ်းရေများ၏ Alpine အိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်.
သင် Chengdu ကိုသွားဖို့လိုလိမ့်မယ်, တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစီချွမ်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည် ဘတ်စ်ကားဖြင့် နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်.
6. အနောက်စီချွမ်ပြည်နယ် – Daocheng Yading သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏လှပသောသဘာဝတရားမှထွက်ပြေးရန်စီစဉ်နေလျှင်, နှင်းဖုံးထိပ်, ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေကန်များ, နှင့်ပရဒိသုတောင်တက်, ထို့နောက် Yading သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. သင်သည်ဤမော်ကွန်းနေရာကိုတရုတ်နိုင်ငံစီချွမ်ပြည်နယ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်, နှင့်သင်ပိုကောင်းအနည်းဆုံးများအတွက်အချိန်လုပ်ချင်ပါတယ် 2-3 ရက်ပေါင်း, အားလုံး၎င်း၏အံ့ဘွယ်သောအမှုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်.
“ Last Shangri-La” သည် Chianrezig သုံးခုနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်, ဂျမ်ဘီယန်, နှင့် Chanadorje တောင်များ, ဒါကတြိဂံဖွဲ့စည်းမှုပဲ, Daocheng မှာအလှဆုံးရှုခင်းတွေကိုဘယ်မှာရှာတွေ့မှာလဲ. ထို့အပြင်, သငျသညျပိုကောင်းဘို့ပြင်ဆင်ထားချင်ပါတယ် 1,000 ရေကန်များ, ယင်းတို့ထဲမှ Erong“ Milk” ရေကန်, နှင့်အံ့သြဖွယ်ငါးအရောင် Danzhen ရေကန်မှာ 4,600 မီတာ.
Daocheng Yading ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
သင်အချိန်တိုတောင်းလျှင်, ထို့နောက် Yading လေဆိပ်သို့ပျံသန်းလိုက်ပါ, ထို့နောက် Daocheng ရှိလေဆိပ်ဘတ်စ်ကားကိုစီးပါ. ဘတ်စ်ကားကိုလည်း Shangri-La သို့သွားနိုင်ပါတယ်, ထိုမှတဆင့် Yading သို့လေ့လာရေးခရီးဘတ်စ်ကားစီးပါ. သို့သျောလညျး, တကယ်လို့မင်းကတရုတ်မှာဒီမော်ကွန်းနေရာကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Daocheng တွင်တည်းခိုပါ.
7. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: Fenghuang, ဟူနန်ပြည်နယ်
Fenghuang သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် 10 တရုတ်စာရင်းတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မော်ကွန်းနေရာများ. ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောမြို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် Qing မင်းဆက် နှင့်၎င်း၏ရှေးဟောင်းလေထုနှင့်အမြင်များကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည် 300 နှစ်ပေါင်း.
ထိုကွောငျ့, သင်ဤချစ်စရာကောင်းမြို့သို့ခြေလှမ်းသောအခါ, သငျသညျစာသားအချိန်ပြန်လမ်းလျှောက်နေကြသည်ခံစားရပါလိမ့်မယ်. မြို့ရဲ့သစ်သားအိမ်များ, တံတားများ, ဘုရားကျောင်းများသည်အချိန်နှင့်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလေထုကိုနေ့ရောညပါဖန်တီးသည်.
ပုံပြင်များအရ, ထိုမြို့ကို Phoenix ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်2Phoenix ကအရမ်းလှတာကြောင့်မထွက်ခွာချင်ဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ကစောင့်ကြည့်ဖို့နေ၏.
Fenghuang မှာဘတ်စ်ကားတွေသာရှိတယ်, ရထားမရှိဘူး. ဟူနန်ရှိအနီးအနားရှိမြို့များမှသင်ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်သည်, Changsha လိုပဲ, နှင့် Zhangjiajie.
8. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: တရုတ်နိုင်ငံ၏မဟာတံတိုင်းကြီး
တရုတ်ပြည်ကမဟာတံတိုင်းကြီးသည်ကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သိသာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရှိပါတယ် 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ.
ကျော်ဘို့ 2,300 နှစ်ပေါင်းတရုတ်၏မဟာတံတိုင်းမြောက်ပိုင်းတရုတ်ရဲ့ရှုခင်းကိုလွှမ်းမိုး, ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားသောခရီးစဉ်၏မီးမောင်းထိုးပြသည့်အရာဖြစ်သည်. ကံမကောင်းသဖြင့်, နှစ်များတစ်လျှောက်သဘာဝတိုက်စားမှုနှင့်လူ့ပျက်စီးမှုကြောင့် 2,000 ကီလိုမီတာဒီထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်ကနေသွားပြီနေကြသည်.
သငျသညျသငျသညျနံရံတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့အိပ်မက်မက်နေတယ်ဆိုရင်လျှင်သတိပြုပါသင့်တယ်, မင်းကိုယူမယ် 18 အနည်းဆုံးတရုတ် Great Wall လမ်းလျှောက်ရန်.
ဘေကျင်းကနေ Badaling မီးရထားဘူတာကိုသင်ရထားစီးနိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်အခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားကို Badaling Great Wall လက်မှတ်ရုံးသို့သွားပါ.
9. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: Qiandao ရေကန်
ထက်ပိုအတူ 1000 ကျွန်းများ, Qiandao ရေကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, တရုတ်ကိုမပြောပါနှင့်. သငျသညျ Chunan တိုင်းပြည်၌ဤခမ်းနားရေကန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်, Zhejiang ပြည်နယ်, anရိယာဖုံးအုပ် 580 စတုရန်းကီလိုမီတာ.
ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျွန်းအိုင်ကိုလူလုပ်ပြုလုပ်ပြီးရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းအပြီးပြုလုပ်ခဲ့သည် 1959. အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်ပြည်ရှိ Qiandao ရေကန်သို့သွားရန်လုံလောက်သောကံကောင်းနေလျှင်, သင်က၎င်း၏အများအပြားရေကန်များနှင့်သစ်တောပန်းခြံရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့မော်ကွန်းအချိန်ရပါလိမ့်မယ်.
Qiandao ရေကန်သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ Hangzhou မှ Qiandaohu ဘူတာသို့ရထားကိုစီး။ တက္ကစီသို့သွားခြင်းဖြစ်သည်။ Qiandao ရေကန်.
10. တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန် Epic နေရာများ: လီဂျန်မြို့ဟောင်း
Lijiang သည်ငါတို့မြို့၏ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည် 10 တရုတ်စာရင်းတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မော်ကွန်းနေရာများ, နှင့်တ ဦး တည်း4တရုတ်ပြည်ရှိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအရှိဆုံးမြို့ကြီးများ. Lijiang ရဲ့ဘုရားကျောင်း, ထူးခြားသည့် Naxi ဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သောကြွေပြားများအိမ်များနှင့်ခြံဝင်းတစ်ခုပါရှိသည်, အတော်လေးမျက်မှောက်ဖြစ်ကြသည်.
သငျသညျ Lijiang ရဲ့မှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ် cobbled လမ်းများ, အပေါ်ကအနီရောင်မီးအိမ်, နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ 354 တံတားများ, သငျသညျ Naxi လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်မိန်းမောတွေဝေခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားတယ်လိမ့်မည်, နှင့်ဗိသုကာ.
ငါ Fenghuang ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Lijiang ကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ရှေးဟောင်းမြို့ ယူပြီးအားဖြင့်ဖြစ်သည် တရုတ်ရထား Lijiang မီးရထားဘူတာသို့, ထို့နောက်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ကားဖြင့်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ.
: Do ငါတို့ရဲ့ blog post ကိုမင်းမြှုပ်ချင်တယ်။10 သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အများဆုံး Epic နေရာများ တရုတ်၌သင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
BestofChina BestTravelDestinationsChina Chinabytrain ချင်းမိုင် ချင်းနတ်သမီး TrainTravelChina ch တရုတ်ပြည်သို့
မည်သို့ရန်ခရီးသွားလုံခြုံစွာ coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း